Wararka - Mabaadi'da xulashada qalabka baakadaha khaaska ah iyo qalabka baakadaha caadiga ah
Qalabka wax lagu rakibo waxaa loola jeedaa qalabka loo adeegsado sameynta weelasha baakadaha kala duwan lana buuxiyo shuruudaha baakadaha wax soo saarka, taas oo ah aasaaska sheyga ee baakadaha badeecada. Waa mid ka mid ah xaaladaha muhiimka ah ee naqshadeynta baakadka si loo fahmo loona barto noocyada, guryaha iyo isticmaalka qalabka baakadaha iyo in si macquul ah loogu doorto qalabka wax lagu rido.
Mabaadi'da xulashada qalabka wax lagu rakibo
Xulashada qalabka ayaa aad muhiim ugu ah naqshadeynta baakadaha. Haddii alaabtu aysan habboonayn, waxay shirkadda u keenaysaa khasaaro aan loo baahnayn. Xulashada qalabka baakadaha waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo astaamaha alaabta laftooda, iyo mabaadi'da aasaasiga ah ee ilaalinta cilmiga, dhaqaalaha iyo deegaanka.
1.Waxay ku saleysan tahay baahida sheyga
Xulashada qalabka ma aha sabab la'aan. Marka ugu horeysa, maaddada waa in lagu xushaa iyadoo loo eegayo astaamaha badeecada, sida qaabka badeecada (adag, dareere, iwm), ha ahaato mid wax daaqaysa iyo mid kacsan, iyo haddii ay u baahan tahay in lagu keydiyo meel ka fog iftiinka . Marka labaad, waa inaan tixgelinno darajada alaabta. Qalabka baakadaha ee badeecadaha heerka sare ah ama qalabka saxda ah waa in ay fiiro gaar ah u yeeshaan muuqaalka bilicdooda iyo waxqabadkooda aadka u wanaagsan; Qalabka baakadaha ee alaabada kaladuwan waa inay fiiro gaar ah u lahaadaan bilicsanaanta iyo wax ku oolnimada; halka qalabka wax lagu rakibo ee badeecadaha darajadoodu hooseyso ay mudnaan siinayaan wax ku oolnimada.
Qalabka wax lagu rakibo waa inuu si wax ku ool ah u ilaaliyaa badeecada, sidaa darteed waa inuu lahaadaa xoog gaar ah, adkeyn iyo dabacsanaan, si uu ula qabsado saameynta cadaadiska, saameynta, gariirka iyo arrimaha kale ee dibadda.
3. Dhaqaale iyo deegaan-saaxiibtinimo
Qalabka wax lagu rakibo waa in laga soo xulo inta ugu macquulsan ilo kala duwan, ku habboon, qiimo jaban, dib loo cusbooneysiin karo, la duudsiin karo, lagu farsameynayo aalado aan wasakh laheyn, si aysan u keenin qatarta dadweynaha.
Qalabka baakadaha caadiga ah iyo astaamaha waxqabadkooda
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah alaabada baakadaha. Kuwa ugu badan ee xilligan la isticmaalo ayaa ah warqad, caag, bir, galaas, dhoobada, qalabka dabiiciga ah, walxaha alaabooyinka fiber ka samaysan, maaddooyinka isku dhafan iyo agabyada cusub ee ilaaliya deegaanka.
Qalabka wax lagu rakibo ee 1.Pighter
In geeddi-socodka oo dhan ee horumarinta naqshadeynta baakadka, wax baako warqad, sida wax baako guud, ayaa si ballaaran loo isticmaalay wax soo saarka iyo dhaqanka ku nool, ka soo saarka warshadaha, baakadaha korontada, in boorsooyinka, sanduuqyada hadiyadda, ka warqad guud baakadaha in warqad baakadaha isku dhafan. , dhammaantood waxay muujinayaan soo jiidashada qalabka baakadaha waraaqaha ah.
Falanqaynta qalabka warqaddu waa mid ku habboon, qiime jaban, ku habboon wax soo saarka mashiinnada badan iyo daabacaadda ganaaxa, waxayna leedahay faa'iidooyinka dib-u-warshadaynta, ilaalinta dhaqaalaha iyo deegaanka.
Qalabka baakadaha caaga ah
Balaastik waa nooc ka mid ah waxyaabaha polymerka synthetic synthetic. Way fududahay in la soo saaro, waxayna leedahay astaamo wanaagsan oo u adkaysta biyaha, u adkaysiga qoyaanka, caabbinta saliidda iyo dahaadhka. Iyada oo alaabooyin ceeriin ah oo aad u tiro badan, qiimo jaban iyo waxqabad aad u fiican, ay noqotay waxyaabaha ugu dhaqsiyaha badan ee soo koraya ee adduunka soo maray 40kii sano ee la soo dhaafay waana mid ka mid ah qalabka baakadaha ugu muhiimsan ee ku jira baakadaha iibka casriga ah.
Qalabka Baakadaha Birta
Maaddaama mid ka mid ah qalabka wax lagu duubo, birta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa baakadaha wax soo saarka warshadaha, baakadaha gaadiidka iyo baakadaha wax lagu iibiyo, waxayna door muhiim ah ka qaadataa qalabka wax lagu duubo.
4.Glass, qalabka baakadaha dhoobada ah
Qalabka aasaasiga ah ee muraayadda waa ciid quartz, soodhaha caustic iyo nuuradda. Waxay leedahay astaamaha hufnaanta sare, awood la'aanta iyo u adkaysiga daxalka, sun aan sun ahayn iyo dhadhan la'aan, waxqabadka kiimikada ee xasiloon iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya waxaana laga dhigi karaa weelal hufan oo isweydaarsi leh oo qaabab iyo midabbo kala duwan leh.
Muraayadda waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa baakadaha saliidda, khamriga, cuntada, cabitaanka, macaanka, qurxinta, waxyaabaha udgoon iyo wax soo saarka dawooyinka.
Ceramicsku waxay leeyihiin xasillooni kiimikaad oo wanaagsan iyo xasiloonida kuleylka, waxayna iska caabin kartaa heerkulka sare iyo daxalka daroogooyinka kiimikada ee kala duwan. Isbeddelada degdega ah ee kuleylka iyo qabowga wax saameyn ah kuma yeeshaan dhoobada, mana laha isbeddel iyo xumaan sannado ah. Waa shey ku habboon baakadaha cuntada iyo kiimikooyinka. Qaar badan oo ka mid ah baakadaha dhoobada lafteeda waa farsamo gacmeed ganaax ah, waxayna leedahay qiimo codsi gaar ah oo ku saabsan baakadaha dhaqameed.
5.Bakhshadda dabiiciga ah
Qalabka wax lagu duubo ee dabiiciga ah waxaa loola jeedaa maqaarka xoolaha, timaha ama caleemaha dhirta, jirridaha, ulaha, fiilooyinka, iwm, kuwaas oo loo isticmaali karo sida qalabka wax lagu duubo ee tooska ama si fudud loogu farsameeyo saxan ama go'yaal.
6.Fiber wax baakadaha dhar
Dharka Fiber waa jilicsan yihiin, fududahay daabicid iyo dheeh, dib ayaa loo isticmaali karaa loona isticmaali karaa. Laakiin qiimaheeda waa ka sareeyaa, adkeysigu wuu hooseeyaa, guud ahaan waxaa lagu dabaqi karaa baakadaha gudaha ee alaabta, sida buuxinta, qurxinta, shoogga iyo shaqooyinka kale. Qalabka baakadaha dharka lagu dhejiyo ee suuqa ku jira ayaa inta badan loo qaybin karaa fiber-ka dabiiciga ah, fiber-ka dadka sameeya iyo fiber-ka synthetic.
Qalabka Baakadaha Isku-darka ah
Waxyaabaha isku dhafan ayaa laga sameeyaa laba ama in ka badan oo nooc oo qalab ah iyada oo loo marayo hab gaar ah iyo qaab farsamo si ay u leedahay astaamaha qalab kala duwan si ay uga kabto cilladaha hal shay, samaynta qalab baakado kaamil ah oo tayo dhammaystiran leh. Marka la barbardhigo qalabka dhaqameed, qalabka isku dhafan waxay leeyihiin faa'iidooyinka keydinta kheyraadka, dib u warshadaynta fudud, yaraynta qiimaha wax soo saarka iyo yareynta miisaanka baakadaha, sidaa darteed aad iyo aad ayaa loo qiimeeyaa loona doodaa.
8.New qalabka baakadaha ee deegaanka u nugul
Qalabyada cusub ee deegaanka u habboon ayaa ah waxyaabo isku dhafan oo loo sameeyay in lagu yareeyo wasakhda cad, kuwaas oo guud ahaan lagu sameeyo isku darka geedaha ama dhirta kale. Waa wax dabiici ah oo aan sahlaneyn in la keeno wasakheynta, waana jihada horumarka ugu weyn ee alaabada baakadaha ee mustaqbalka.